पेरिस को 10 जिज्ञासाहरु कि तपाइँ अवाक रहन्छ यात्रा समाचार
पेरिस को जिज्ञासाहरु कि तपाइँ अवाक रहन्छ
मोनिका सान्चेज | | सामान्य, पेरिस, के हेर्ने
पेरिस छ कि एक शहर हो धेरै प्रस्ताव गर्न। आकर्षणले भरिएको ठाउँ जुन बर्षमा एक रमाइलो मौसमको आनन्द लिईरहेको बेला, राजधानीलाई सज्जित गर्ने भीड वा अविश्वसनीय स्मारकहरूमा आफूलाई गुमाउन।
१० 105 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफलको साथ, र कुनै पनि कुनामा हेर्न धेरै आश्चर्यका साथ, पक्कै पनि पी को १० जिज्ञासाarís जुन म तपाईंलाई भन्दैछु, तपाईंले तिनीहरूलाई चिन्नुहुन्न।
1 राजधानीमा इजिप्टको एक कुना
2 त्यहाँ तीनवटा लिबर्टी मूर्तिहरू छन्!
3 बिहानको खाजा, रोटी र चीजको लागि। र खाजाको लागि, र बेलुकाको खानाको लागि ...
4 के तपाईं पेरिसलाई विशाल गिलोटिनको साथ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ?
5 ल्याटिन क्वार्टर, सबै भन्दा वातावरणको साथ ठाउँ
6 किलोमीटर शून्य, Notre Dame को वर्गमा
7 पेरिसमा १ 13 जिल्लाहरू भएन
8 लूभ्रे संग्रहालयको घुमाउरो सीढी
9 नोट्रे डेम क्याथेड्रलको रहस्य
10 अभिवादन, एक कला
राजधानीमा इजिप्टको एक कुना
लूवर संग्रहालय पिरामिड आर्किटेक्ट आईओह मिंग पे द्वारा डिजाइन गरिएको थियो, र यसको उद्घाटन १ 1989 20,1 in मा भयो। यसको उचाई २०.१ मीटर छ र कुल 673 लेमिनेटेड ग्लास प्यानलहरू छन्। १ 180० टनको वजनसहितको तापक्रम इजिप्टको चेप्सको पिरामिडमा दर्ता गरिएको जस्तै छ: degrees१ डिग्री सेल्सियस। अरु के छ त, समान आयामहरू छन्.
त्यहाँ तीनवटा लिबर्टी मूर्तिहरू छन्!
सबै भन्दा राम्रो चिनिएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेको छ, म्यानहट्टन टापुको दक्षिणमा, तर त्यहाँ दुई प्रतिकृतिहरू छन् जुन फ्रान्समा छन्: एउटा कोलमारमा, २०० inaugurated मा उद्घाटन गरियो, र अर्को पेरिसमा। स्वान टापुमा। पछिल्लो इटालियन-फ्रान्सेली कलाकार अगस्टे बार्थोल्डि द्वारा डिजाइन गरिएको थियो, र जुलाई,, १41889 मा उद्घाटन गरिएको थियो।
बिहानको खाजा, रोटी र चीजको लागि। र खाजाको लागि, र बेलुकाको खानाको लागि ...
यदि तपाईंले कहिल्यै कसैलाई यसो भनिरहेको सुन्नुभयो कि पेरिसवासीहरू हरेक दिन रोटी र चीज खान्छन् र तपाईंले विश्वास गर्नुहुन्न, तपाईं गलत हुनुहुन्थ्यो। उनीहरुको लागि, यी दुई खाद्य पदार्थ आधारभूत छन्यति धेरै कि उनीहरूले पनि एकदम कडा नियमहरू पालना गर्छन् उत्तम बेग्युटेस र उत्तम चीज। र ती नयाँ कसरी ताजा बनाइन्छ ...!
के तपाईं पेरिसलाई विशाल गिलोटिनको साथ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ?
यसलाई निर्माण गर्न थोरै मात्र बाँकी थियो। र यो हो, १ 1889 XNUMX of को विश्वव्यापी प्रदर्शनीको लागि, एक स्मारकको कामको डिजाइन गर्न एउटा प्रतियोगिता आयोजित गरिएको थियो जसको अन्तमा सहरको पदचिन्ह हुनेछ। अन्य प्रस्ताव मध्ये, त्यो थियो २ 274 मिटर अग्लो गिलोटिन बनाउनुहोस्, यस अभ्यासमा फ्रान्सको योगदानको सम्झना गर्न। भाग्यवस, अन्तमा, यो एफिल टावर निर्माण गर्ने निर्णय गरियो, जुन कुनै अपमानजनक छैन र उच्च सजावटी मूल्य भएकोमा घमण्ड गर्न सक्छ।
ल्याटिन क्वार्टर, सबै भन्दा वातावरणको साथ ठाउँ
यो Ile de la Cité को दक्षिणी भागमा अवस्थित छ, र सब भन्दा जीवन्त क्षेत्रहरू मध्ये एक हो। मध्यकालीन युगको बखत, यो ल्याटिन बोल्ने विद्यार्थीहरूको बसोबास थियो। यो भन्नु पर्छ कि यो एक थियो १ 1968 MayXNUMX मे क्रान्तिको बेला तातो ठाउँहरूयद्यपि आज यो शान्त वातावरण हो, रमाईलो रेस्टुरेन्टहरू र क्याफेहरू छन् जसले तपाईंलाई बस्न र आराम गर्न आमन्त्रित गर्दछ।
किलोमीटर शून्य, Notre Dame को वर्गमा
यो फ्रान्सको केन्द्र होइन, तर यो पेरिसको हो। यस बिन्दुबाट, पोइन्ट जुरोबाट जुन उनीहरूले फोन गर्छन्, तपाईं शहर मा सबै सडक को दूरी गणना गर्न सक्नुहुन्छ। यस क्षेत्रमा अक्सर भनिन्छ कि यसमा कदम राख्नेहरू सम्भवतः फर्कन्छन्, किनकि भाग्यमा उनीहरूको साथमा रहनेछ।
हामीलाई थाहा छैन कि यो सहि छ वा छैन, तर त्यो ठाउँ पक्कै मनमोहक छ।
पेरिसमा १ 13 जिल्लाहरू भएन
नम्बर १ number थियो (र अहिले पनि धेरै संस्कृतिहरूद्वारा गरिएको छ) बदनामको संख्या मानिन्छ। १13 1795 of, फ्रान्सको फ्रान्सेली क्रान्तिको क्रममा १२, रdsub उपविभागहरू स्थापना भए, तर उनीहरू एक अर्को स्थापना गर्न चाहँदैनथे शहर अनुग्रहबाट खस्नेछ भन्ने डरले। केहि स्पष्ट छ कि छैन, किनभने आज यसमा २० जिल्लाहरु छन् र पहिले भन्दा बढी जीवित छ।
लूभ्रे संग्रहालयको घुमाउरो सीढी
लूभ्रे संग्रहालयमा हामी देख्न र सुन्दर घुमाउरो सीढी प्रयोग गर्न सक्छौं। तर, के तपाईंलाई थाहा छ त्यहाँ बिभिन्न प्रकारहरू छन् र ती फरक प्रकार्यहरू छन्। तिनीहरू तत्व हुन् जसले धेरै ध्यान आकर्षित गर्छन्, यति धेरै एक प्रसिद्ध वास्तुकारले उनीहरूको अध्ययन गर्न १० बर्ष बित्यो। अब उसले एक प्रभावशाली काम गरिसकेको छ, जसमा उनले आफ्नो कथा, उनीहरूको महत्त्व, उनको सफलताको कारण र अझ बढी बताउँछन्। थप जानकारीको लागि हामी तपाईंलाई सिफारिस गर्दछौं कि पढ्न आर्किटेक्ट अल्बर्टो संजुर्जोको डक्टरल थीसिस.
नोट्रे डेम क्याथेड्रलको रहस्य
यो विश्वमा सब भन्दा प्रसिद्ध गोथिक गिरजाघर हो, र पेरिसको सबैभन्दा भ्रमण गरिएको स्मारक हो। तपाई यसलाई Ile de la Cité, जहाँ बाट पाउन सक्नुहुन्छ gargoyles त्यसले छानाबाट पानी निकाल्छ, जहाँबाट यो विश्वास गरिन्छ कि तिनीहरू रात बिउँझिए कि आर्क अफ जोनलाई खम्बामा जलाइएको थियो।
अभिवादन, एक कला
बोन्जोर वा बोनसोर (केस जस्तो हुन सक्छ) आवाजको सामान्य स्वरको साथ भन्न पर्याप्त छैन, तर बरु धेरै अभ्यास गर्नुहोस् ताकि यो सम्भव भएसम्म प्राकृतिक रूपमा बाहिर आउँदछ। पेरिसवासीहरू उनीहरूको भाषा मन पराउँछन्, त्यसैले यदि तपाईले उनीहरूलाई अभिवादन गर्नुहुन्छ भने पनि, यदि पूर्णता पूर्णतामा अवस्थित छैन, उत्तम अभिवादन छ भने, म तपाईलाई आश्वासन दिन्छु कि तपाईले उनीहरुसंग गरेको कुराकानीमा तपाई रमाईलो हुनुहुनेछ।
पेरिस एउटा सहर हो जहाँ हराउनु सधै रमाइलो हुन्छ, विशेष गरी यी जिज्ञासाहरू पढेपछि, तपाईलाई लाग्दैन?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » पेरिस » पेरिस को जिज्ञासाहरु कि तपाइँ अवाक रहन्छ